From Kaayaneey to Kansas: wax ka baro Hayaankii Axmed Caafi | Saadaal Media
From Kaayaneey to Kansas: wax ka baro Hayaankii Axmed Caafi
Aug 29, 2017 - jawaab
Axmed Maxamed Caafi waxuu ku dhashay meel aan ka dheerayn miyiga ‘Seere’ oo ka tirsan deegaanka Ceel-gaduud ee hoostago Garbahaareey. Meesha u ku dhashay waa miyyi, reerkooduna wuxuu ahaa reer miyyi xoolo dhaqata reer guuraa ah. intii dalku nabadda ahaa, Axmed qaraabo badan oo wax haysata kuma uusan lahayn magaalooyinka waaweyn ee dadku aadi jireen sida Xamar, waalidkiina dadaal uma galin inay helaan cid ay daranyo uga dhigaan wiilkooda si uu wax ugu soo barto.
Waalidku arrintaa kuma uusan qaldanayn oo waxa ay yaqaaneen waxa ugu fiican ayaa ahaa in uu noqdo waxtar dhiniciisa aysan wadaanta ka liicin, taasoo mustaqbalka u horseedi doonto tabcidda geel badan oo bahdiisu ku faanto.
Si hadafkaasi ay uga dhabeeyaan waalidkiisa waxay Axmed oo aad u da’ yar daba-dhabe ooga dhigeen geel horweyn ah. marki uu noqday mid ku filan qaadida dhagalka iyo dhalada sunta geela loogu kaydiyo, ayuu Axmed hir kale u bidhaamay. wuxuu ku hamiyay inuu meesha isaga tago aadana meel uu ku baran karo Qur’aanka kariimka ah oo aad ugu weynaa qalbigiisa.
Subax ayuu ka dhuuntay geeli lagu ogaa, safar dheer, guuro-bahalayn iyo silic rafaad ka dibna wuxuu gaaray Buurdhuubo oo uu qaraabo tiisa ah ku ogaa. Halkaas ayuu ka bilaabay Qur’aanka iyo iskooladdi qaxootiyada ee loo yaqaanay AAT. Nasiib darro, waqti yar ka dib, dowladdi ayaa dhacday dantuna waxay ku qasabtay inuu reerkoodi iyo miyigii dib ugu laabto.
Sanadki 1993-di ayuu maqlay sheekh kutub ka aqriyo Ceel-cadde oo aan ka dheerayn deegaanki uu ku noolaa. sidaas ayuu Ceel-cadde ku yimid oogana mid noqday xertii ugu horaysay ee hoos fadhiisatay Sheekh Xuseen Ibraam Axmed-Nuur Allaha dhowree. 1994-ti, sheekha iyo xertiisiba oo Axmed uu ku jiro ayaa usoo wareegay dagmada Garbahaareey.
Sanadihii uu ku jiray barashada carabiyada, Axmed niyadiisa kama bixin inuu helo aqoon kororsi kale. wuxuu jeclaa inuu barashada diinta ku daro midda maadiga. Nasiib darro, deegaanka uu ku noolaa maahayn mid wax-barasho ka jirto. waxay ahayd meel indhaha isku haysata si ba’anna ay u saameeyeen dagaaladii sokeeye. ma lahayn iskoollo wax laga barto marki laga reebo mid hoose/dhexe oo caruurta da’da yar lagu baro Soomaaliga. Axmed samir ayuu dugsaday halkiisi ayuuna rabbi ku sugay ilaa laga soo gaaray 2001-di.
Axmed markii uu ii yimid, wuxuu i waydiiyay su’aal yaab leh taasoo ahayd, Ma u malaynaysaa inaan baran karo luuqadda Ingiriiska? Su’aasha Axmed waxaa ka muuqatay in ay barashada luuqadda Ingiriisku la ahayd mid aad u adag, suura-galnimadda in la bartana ay tahay mid cariiri ah. Fakarka ceynkaas ah Axmed kali kuma ahayn ee wuxuu ahaa mid si baahsan wadanka ooga jiray ilaa maantana caqabad ku ah dad badan oo wax baran lahaa.
Duruufaha adag ee ku xeeran gayiga soomaaliyeed, waqtiga seegay yaraanti iyo dhiiri galin la’aanta hayso dhalinta ayaa dad badan ku qasabtay in ay aaminaan in aysan gaari karin hadafkooda inta ay ku nool yihiin deegaan xaalkiisu sidaas yahay.
Hayyaankii dheeraa ee uu Axmed usoo galay wax barashada waxay dhashay miro dhaxal gal ah oo u horseeday maqaam sare iyo magac taariikhda galay. Wuxuu noqday aqoonyahayn dhinac walba ka dhisan, madax sare oo maamulo tiro dad ah. Tusaale, Maanta wuxuu haystaa labo ‘Degree’ oo midna diini tahay midna maadi tahay. wuxuu xafidsanyahay Qur’aanka kariimka ah. Wuxuu madax ka yahay hay’ad uu isagu asaasay taaso ay u shaqayso in ka badan afartan qof isla markaana gargaar u fidiso kumannaan dad ah.
Laba, dadaal: Dadaalku waa saldhiga guusha. ma jiro qof xaqqiijin karo hal hadaf oo qur ah dadaal la’aan. Dadaalka laga hadlayo maahan mid dhowr maalin aad oraday ama wax isku dayday ka dibna aad ka caajistay ee waa inuu noqdaa mid joogta ah oo aysan joojin karin bir iyo buur toona.
Wuxuu ku jabaaway “maxaad iga waraysanaysaa wataa Axmed Gaarufki cimaamada dhusuqa badan wadan jiray oo masaajidka gaajada kula dhici jiray kun doolar igu dulqaadanayee! aduunka caynkaas ah ayaan ku noolahay”. Saaxiibkeey hadalkiisa waxaa ka muuqatay in uu eedaynayo aduunka uu joogo iyo waqtiga ay kusoo aaday noloshiisa balse aysan u muuqan in dadaal xumadiisu meesha dhigtay.
waxaan ooga tagayaa qof walba oo farriintaan aqriyo “… qayrkaa darajaduu helay, dayaxana ha gaartee, Rabbi kaama daahine, dadaal gaari doontide”.